Misitery Ny Fahafatesan’ny Minisitra Ogandey, Mikorontana ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Misitery Ny Fahafatesan'ny Minisitra Ogandey, Mikorontana ny Aterineto
Voadika ny 04 Oktobra 2015 5:36 GMT
Iray amin'ireo sary farany an'ny Jen. Aronda, nalaina tany Korea Atsimo. (Sary tamin'ny Aterineto)
Ny Sabotsy 12 September 2015, nifoha tao anatin'ny vaovao nahatohina ny firenena, tamin’ny fahafatesana tampoky ny Minisitry ny Raharaha Anatiny ao Ogandà sady Lehibe taloha tao amin'ny Hery Fiarovana, Jeneraly Aronda Nyakairima. Maty tany Dobay raha niserana tany avy amin'ny fitsidihana tany Korea Atsimo ny Jeneraly Aronda.
Taorian'ny nipoahan'ilay vaovao, maro ireo olona nampiasa ny media sosialy hanehoana ny fiaraha-mioriny. Ireo mpampiasa media sosialy sasany anefa nanomboka namosaka filazàna tsikombakomba tamin'ny fahafatesany. Nandritra ny fandevenana ara-panjakana an'i Aronda ny 19 Septambra 2015, nampitandrina ireo mpampiasa media sosialy ny Minisi-panjakana misahana ny Raharaha Anatiny, James Baba, ny amin'ny fampiasàna ratsy ny tambajotra sosialy mba hanelezana vaovao diso sy manimba. Nilaza ihany koa ny minisitra fa mieritreritra ny hampiasa ny sehatry ny lalàna ny governemanta mba hamaizana ireo mpampiasa media sosialy manely vaovao mampikorontana.
Nilaza ny tatitra taorian'ny fahafatesana, nalefa ny 17 Septambra 2015, fa maty noho ny tsy fahampian'ny tosiky fony ilay Jeneraly. Nandritry ny fotoana ofisialy fanaovana veloma farany anefa, nilaza izao ny vady navelany, Ramatoa Lindah Aronda:
Ilay olan'ny fo izay lazainareo io, ENY mety hoe nisy taminy izany kanefa izahay [ny fianakaviana] tsy mbola nahita izany mihtsy.
Ireo zanako [roa] ireo no vavolombeloko. Feno fahatanjahana tanteraka izy…Nandritra ny 19 taona, tsy mbola tafajanona tao am-pandriana mihitsy izy na hoe narary.
Kanefa, nilaza ny Filoha Museveni fa nahavita nahazo tatitra ara-pahasalamana izay nilaza fa nanana “fiakarana tosidrà kely” i Aronda tao anatin'ny taona maro.
Nanohana ny ahiahian'ny vady navelan'i Aronda i Peter Clever, mpampiasa Facebook :
Manana antony maro hisalasalàna izy, satria na talohan'ilay tatitra taorian'ilay fahafatesana aza, efa nananan'ireo loharanon'ny governemanta sahady hoe maty noho ny tsy fahampian'ny tosiky fo izy; taiza no nahazoan'izy ireo izany loharanom-baovao izany nialoha ny nandefasana ilay dokotera hanao fanadihadiana momba ny nahafatesany? Horaiketina anaty boky izany famonoana mangina izany indray andro any.
Mpampiasa Facebook iray hafa, Namanya Robert, nanontany tena hoe ahoana no tsy ahalalàn'i Ogande ny marina amin'ilay raharaha:
Tokony nanana tantara nitovy tamin'izany tany aloha ny olona iray matin'ny fijanonan'ny fo, satria mety zavatra mihombo miandàlana ny tsy fahampian'ny tosiky ny fo, ahoana no hahafantarantsika ny marina
Nilaza ny mpiara-miasa taminy sy naman akaikin'ny Jeneraly indrindra, Brig. Kasirye Gwanga, fa tsy maty noho ny tsy fahampian'ny tosiky fo ny jeneraly fa kosa nisy olona namono azy. Taminà lahatsary nalefa tamin'ny Aterineto, nanome toky ny hikaroka ireo nanao izany izy.
Ny taona 2013, raha notendrena ho amin'ny toeran'ny Minisitry ny Raharaha Anatiny ny Jeneraly Aronda Nyakairima, ny hiady amin'ny kolikoly izay efa lalim-pàka tanteraka tao amin'ny ministeran'ny fifindrà-monina sy ny birao fikarakaràna taratasy ahazoana mivezivezy any ivelany, ny tena asa nifotorany indrindra. Nandritra ny kabarim-panekeny, nanome toky ny hiasa andro aman'alina izy mba hanao an'i Ogandà ho firenena tsaratsara kokoa.
Niarahaba azy tamin'ny asa nataony, nandefa izao bitsika izao ilay mpanao gazety zokiolona ao amin'ny NTV Uganda, Maurice Mugisha:
Tamin'ny andro voalohany niasàny tao amin'ny biraony amin'ny maha Minisitra azy, nilaza i Aronda hoe ‘Mikasika ny fanomezana tolotra tsara ny antsika’. Eny tena izany tokoa… Veloma mandrakizay Jeneraly. #RIPAronda
Naneho hevitra tao amin'ilay vohikala New Vision, Isaac nahatsapa ihany koa i Wamala fa misy zavatra tsy mazavazava ny amin'ny fahafatesan'i Aronda:
miala tsiny amin'ny fahaverezana natrehantsika fa tsy maintsy misy zavatra ao ambadiky ny fahafatesany ao, tsy ampy ny filazàna amin'ny teny rehetra fotsiny mba hanazavana hoe tena tianay tokoa raha mbola velona teo ianao
Nahita ny fahafatesan'i Aronda ho mampieritreritra i Dalton Owponya:
Ny lehilahy natanjaka indrindra (ara-batana) tao amin'ny kabinetra, maty noho ny olan'ny fo? Toa mampieritreritra izany. Fahabangàna lehibe ho an'ilay hany OB avy amin'ny Sekoly Ambony Kitgum tao amin'ny kabinetra, izay lasa mbola tanora loatra!
Ilay mpampiasa, Brian Akandwanaho, nampitaha ny fahafatesan'ny Jeneraly Aronda tamin'ny an'ilay lehiben'ny miaramila Ogande teo aloha James Kazini:
Tena manontany tena marina aho hoe inona no manjo ny ao amin'ny filohan'ny hery fiarovana ao? Avy amin'i kazini ka hatramin'i Aronda, samy maty tsy fantatra hoe nahoana. MAP ary enga anie Andriamanitra hampiasa ny hafa mba hanohy ireo drafitra tsaranareo ho an'ny firenena
Nangataka ny governemantany hanao fanadihadiana lalina i Jims Marie, mialoha ny hanaovana tsoakevitra farany momba izay antony nahafatesan'i Aronda:
Misy zavatra diso tanteraka ao …. ! Mila fanadihadiana lalina sy fizahàna ny razana ataon'ny governamentan'i Ogandà. Inona no zavatra nohaniny tany anaty fiaramanidina na nialoha ny nialàny tany Korea Atsimo? Iza avy ireo olona nihaona taminy tao anatin'ny 24 ora farany nialoha ny nialàny tany Korea Atsimo..? Nihaona taminà tomponandraiki-panjakàna avy any ivelany ve izy, ary iza avy izy ireo, ary avy amin'ny(ireo) firenena iza?….Toa mampiahiahy ny zavatra rehetra..!! Tena ilaina ireo fanadihadiana matotra mba ahitàna hoe inona marina ny zavatra niseho? Afaka ampidirina amin'ny alàlan'ireo zavatra rehetra simika na fanafody ny tsy fahatomombanan'ny fo. Fivahinianana noho ny asa ve no nataony.? Iza tao amin'ny ministerany na ny governemanta ireo niaraka nandeha taminy? Amin'ny toerany, ireo andraikiny teo amin'ny firenena teo aloha, ny amin'ny resaka fiarovam-pirenena sy ny raharaham-pitsikilovana, tokony hanontany sy hanadihady lalina ny governemanta momba izay zavatra nitranga manodidina ny fahafatesany…! Misy savatra toa tena diso tanteraka eto..!
Nisolo tena ny miaramila Ogandey ihany koa ny Jeneraly Aronda Nyakairima tao amin'ny Parliemanta, izay nahatonga azy tsy hitovy hevitra matetika amin'ireo mpanao politika hafa. Tsy mamela ireo miaramila amperinasa hitazona toerana politika ny lalàna ao Ogandà, toy ny an'ny minisitra. Tsy mazava tsara hoe nahoana izy no navela nisolo tena ny miaramila Ogandey tao amin'ny Parliemanta no sady efa minisitry ny kabinetra.
Niantso ny hanaovana fanadihadiana lalina tamin'ny nahafatesan'i Aronda ny filohan'ny antoko tena mpanohitra ao Ogandà, Kiiza Besigye. Ireo Mpikambana ao amin'ny Parliemanta indray anefa, mbola mizarazara ny amin'ny filàna ny hanaovana fanadihadiana momba ny nahafatesany.